Shiinaha 2021 Farshaxanka Cusub Xilliga Cusub Farshaxanka Farshaxanka Cartoon-ka Gabdhaha Suufka ayaa ugu sarreeya Soo-saaridda iyo Warshadda Tee caadiga ah | Caqli badan
2021 Farshaxanka Cusub Xilliga Cusub Farshaxanka Farshaxanka Cartoon-ka Gabdhaha Gabdhaha ah ayaa ugu sarreeya Tee-ga caadiga ah
Gacmo -gacmeedyo gaagaaban oo garaaf leh Tee, ayaa doonayay muuqaalka kore ee xarragoon leh laakiin leh dabacsanaan iyo taam ka dheer kii caadiga ahaa. Waa funaanad T kaamil ah! Maaddadu waa raaxo iyo dabacsanaan waxayna ku siinaysaa muuqaalka aad u socoto! Funaanaddan dumarka waxay ka samaysan tahay cudbi cufnaanta sare leh, oo waara oo ku filan nolol maalmeedka Xagaaga iyo Sprint habeen iyo maalinba. Xulasho qabow si aad u xidho oo aad u siiso deganaansho labis joogto ah. Muuqaal cusub oo ah qaabab kala duwan oo naqshad adag leh oo leh farshaxanno iyo qalabyo kala duwan. Shaati-gacmeedyadaan gacmaha gaaban waxaa loogu talagalay inay ku siiyaan muuqaal ujeedo badan leh oo iska caadi ah & raaxo leh. Hadday tahay iyo meel kasta oo aad qoob -ka -cayaarayso ama ku habboon tahay surwaalka suudhka ah ee xafiiska dhexdiisa, funaanadaha ayaa ku siin doona muuqaal raaxo oo nadiif ah inaad ilaaliso. Cirbadaha nadiifka ah iyo farsamooyinka cusub ayaa keena muuqaalka duugga oo wanaagsan.
(cm) Cabbirka Dhererka Bust Ballaca Garabka
Shaxda Isbarbar -dhigga
(inch) Cabbirka Dhererka Bust Ballaca Garabka
Dhammaan cabbiradu waa cabbiraad dhab ah, waxaa jira qalad yar, fadlan ku adkaada nooc ahaan.
100%suuf, maaliyad keliya
Qoorta Crew ee feeraha elastane ee suufka ah
Cirbad labalaab ah oo isku tolaysa oo leh tol xoog leh
Ku habboonaanta joogtada ah
1. imisa midab ayaa la heli karaa？
Waxaan u habayn karnaa midabka dharka sida ku xusan xirmada teknolojiyaddaada midabka Pantone. Haddii ay jirto farshaxan waxaan kaliya u baahanahay faylka qaabka faylka AI iyo sidoo kale koodhka midabka Pantone ee midabada oo dhan.
2.Waa maxay nooca shahaadada aad haysato?
Waxaan nahay warshad, soo -saare, waxaan leenahay hubinta warshadda BSCI. Waxaan kaloo leenahay Disney FAMA. Waxay kuu soo diri kartaa nuqulka si aad u tixraacdo.
Tirada dalabkayaga ugu yar ee funaanadda waa 1200 kumbiyuutar /midab /qaab.
4.Sidee loo dalbadaa?
Fadlan noo soo dir su'aalahaaga oo leh shuruudo dhar ah, farshaxan-gacmeed, sifeyn-cabbir iwm. Waxaan kuu soo qaadan karnaa qiimaha, ka dibna aan soo saarnaa shaybaarka habboon, oo aan dalbannaa amarro waaweyn.
5.Waa maxay muddada lacag bixintaada?
Siyaasaddayada lacag -bixinta waa 30% TT oo ah lacag -bixin heer sare ah iyo 70% TT ka hor inta aan laga dhoofin warshaddeena. Waxaan sidoo kale aqbalnaa L/C marka la arko qaddar badan waddamada qaarkood.
Waxaan bixinnaa adeegga samaynta muunad ka hor intaanan dalban amarada waaweyn
OEM iyo ODM ayaa la heli karaa
200,000pcs bishiiba awoodda wax soo saarka ballaaran
Adeeg samaynta muunad degdeg ah
Dhammaantood waa kooxda iibka ee ku hadasha Ingiriisiga iyo adeegga iibinta kadib waxay ka dhigtaa isgaarsiinta mid ku habboon.
Hababka xiriirkeena oo ay ku jiraan laakiin ma aha oo kaliya emayl, whatsapp, skype, taleefan, kulanka zoom, iwm.
Waxaan u diri karnaa jadwalka wax -soo -saarka ballaaran, sawirrada, fiidiyaha xitaa qulqulka tooska ah inta lagu jiro amarrada socda haddii macaamiishu u baahdaan, si aad si fiican uga ogaan karto xaaladda wax -soo -saarka dhammaan tallaabooyinka.
Hore: Naqshado lacag la'aan ah oo midabyo kala duwan leh iyo cabbirro isku -dhafan oo ah shaati polo caadadii ah
Xiga: Dumarka Jumlada ah Midabada Caadiga ah ee Caadada ah Gacanta dheer ee Qoorta Qoorta
Tayada Koowaad, Badbaadada Waa La Xaqiijiyay
Iibinta kulul ee Arhaan International oo tayo sare leh ...
Taangiyada Ragga ee Caadiga ah ee Dabeecadda leh ee ...
Naqshado bilaash ah oo midabyo kala duwan leh iyo cabbirro u gaar ah ...
Hablaha anime-hip-hop-ka ee Harajuku co ...
2021 astaysto haweenka logo Tie Dye midab badan S ...